TORITENY Alahady 20 Aogositra 2017 | FJKM Amboniloha
Genesisy 39 : 19 – 23 / Jaona 16 : 29 – 35 / Hebreo 10 : 19 – 26
Resin’ny fakam-panahy ny vadin’ny Potifara noho ny bika sy hatsaran-tarehin’i Josefa. Saingy ity farany dia lehilahy natahotra An’Andriamanitra ka tsy nanota akory.
Ny mampiavaka ny olon’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao dia : Manana ny Fanahy Masina
Manana fahendrena, tia fahamasinana, manaja ny hafa. Izany no toetra hita sy voamarika amin’ny olon’Andrimanitra rehefa manana ny Fanahy Masina ao anatiny.
Mahatsapa ny olona manana ny Fanahy Masina miasa ao anatiny fa lehibe sy mahatahotra loatra izao Andriamanitra izao, ka tsy azo sangina, na hanaovana kitoatoa amin’ny fitondran-tena sy ny fiainana manontolo.
Miova ka manjary miharatsy ny fiainana rehefa volavolain’ny fiaraha-monina. Ny olon’Andrimanitra anefa dia tokony hijoro hatrany amin’izay efa nampianarina sy nanefena azy araka ny Soratra Masina.
Ohatra : Raha vao tsy miray tsikombakomba amin’ny ratsy ao amin’ny fiaraha-monina dia tsy mahazo sady tsy hahavita na inona na inona ny olona manaiky novolavolain’ilay ratsy.
Lesona : Aoka hiavaka aho, olon’Andriamanitra ka tsy hanova ny fahamarinana izay efa napetrak’Andriamanitra tamiko.
Ny mampiavaka ny olon’Andrimanitra eto amin’izao tontolo izao dia : Tahian’Andriamanitra
Rehefa miaina ao anatin’ny fahamarinana ny olon’Andriamanitra dia feno fitahiana sy fiarovana. Josefa dia nijoro tamin’ny fahamarinana sy ny fahamasinana ka dia nandray fitahiana maharitra. Cf Josefa tao an-tranomaizina lasa nifehy sy nandrindra ny filaminana.
Fitahiana maharitra, fanambinana amin’ny atao rehetra ; ary tsy azo afenina fa hitan’ny olona rehetra no manaraka ny olon’Andriamanitra rehefa mijoro sy miaina amin’ny fahatahorana ka mivelona amin’ny fahamarinana.
Nahoana no tsy mba hitako miseho miharihary amiko ny fitahian’Andriamanitra ?
Valiny : Mila mamantatra izay takin’Andriamanitra amiko, mety ho toetra, fiainana, fitondran-tena, fahalemena sns…..
Izao tontolo izao dia misarika antsika hanaonao foana, saingy raha olon’Andriamanitra aho dia mila mijoro sy miavaka satria manana ny Fanahy Masina miasa ato anatiko. Miala amin’ny ratsy ary tsy manaiky ho resin’izany mihitsy.
Raha izay no fiainako dia fitahiana sy fanambinana maharitra no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra iainako.
Catégories :	Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 30 août 2017